China 43″ Ibhetri ephathwayo yangaphandle-Enamandla okuKhanya okuPhakamileyo kweDijithali Imiqondiso A-Isakhelo sokuBonisa iDijithali yeDijithali ye-A-Ibhodi yeNtengiso yoMzimveliso kunye nabavelisi | Layson
43″ Ibhetri ephathwayo yangaphandle-Enamandla okuKhanya okuPhakamileyo kweDijithali Imiqondiso ye-A-Frame Display eSmart Digital A-Ibhodi yeSibhengezo soMdlali
1500 Nits ukuqaqamba okuphezulu IP65 imozulu 7-8 iiyure Ixesha lokuqhuba iAdroid Media player Uphuculo lweNethiwekhi
Yima kwisihlwele ngesi 43″ isisombululo seempawu zedijithali eziphathwayo.
Thatha imiqondiso yakho yedijithali apho ifuneka khona. Esi sikrini se-A-frame esiphathwayo sifanelekile ngokufanelekileyo kwiihotele, iinkomfa, amaziko ezemidlalo kunye neevenkile ezithengisayo ezifuna iimpawu eziguquguqukayo ezinokutshintshwa ngokukhawuleza ukuze zihambelane neziganeko. Le miboniso ye-free-standing sisisombululo sangaphandle esiphathekayo ngokupheleleyo kwaye sinokushukunyiswa lula ngumntu omnye njengoko sibonisa i-casters esisigxina. La mavili angatshixwa ukunqanda iscreen ukuba singahambi kanye endaweni. Ngokhuseleko olongezelelweyo i-padlock ingasetyenziselwa ukutshixa oku endaweni.
I-IP65 ephathwayo eKalwe kwiNdawo eNgangeni kwimozulu
Isiboniso esineBattery eneXesha lokuSebenza ngeyure ezili-14
IHD egcweleyo eyi-1500 cd/m² I-LCD yokuKhanya ene-Ambient Light Sensor
IiCastor ezimagingxigingxi zothutho olulula
I-Stylish Robust Enclosure
Ibha yokutshixa ekhuselekileyo
Imiqondiso yeDijithali yangaphandle engenazingcingo
Iibhetri ze-lithium-polymer ezihlanganisiweyo ziguqula indlela osebenzisa ngayo iimpawu zedijithali. Awusabotshelelwa kwisokethi yamandla ekufutshane. Ngesi sisombululo sebhetri ye-slimline yorhwebo ufumana malunga neeyure ezili-14 zexesha lokusebenza. Ngaphezulu kokwaneleyo kwimisitho yemihla ngemihla kodwa ukuba ufuna ixesha elingakumbi ungayifaka kwi-mains kwaye uqhube ngokungenasiphelo.
Isingxobo sangaphandle sinomlinganiselo we-IP65 nto leyo ethetha ukuba igcina ngaphandle zonke i-swarf emoyeni, uthuli kunye namanye amasuntswana kunye nokukhuselwa kuyo nayiphi na imeko yemozulu emanzi; ukwandisa uluhlu lweendawo ezinokubakho.
Ezi ziboniso zibonisa iglasi epholileyo ngaphambili yokukhusela ipaneli kunye nepolymer ebunjiweyo yangasemva ukwenzela ukuphatheka okuphuculweyo. Umboniso, inkxaso kunye neecastors zilungisiwe ngokungafaniyo neebhodi ze-A zemveli zokuqina okuphezulu.
I-Digital Android Battery A-Frames iza kunye ne-HD Android media player eyakhelweyo, ekuvumela ukuba uhlaziye ngokulula usebenzisa imemori ye-USB. Layisha imifanekiso yakho kunye neevidiyo kwimemori ye-USB emva koko uyifake kwisiboniso, esiya kukopa iifayile kwimemori yayo yangaphakathi. Nje ukuba ususe i-memory stick isikrini siya kuthi emva koko siqalise ukudlala imifanekiso kunye neevidiyo kwi-loop eqhubekayo. Ngentlawulo encinci ungaphinda uphucule isikrini sakho ukuba sinethwekhi, ikuvumela ukuba uhlaziye isikrini sakho ukude ngeLAN, Wi-Fi okanye 4G.
Indawo yokubonisa (mm)
2GB DDR4 (Ngokuzikhethela 3GB)
Ibhetri ye-lithium edibeneyo yepolymer
Ubungakanani bemveliso (WxHxD mm)
Ubungakanani bokuPakisha (WxHxDmm)
Ubunzima obububo (kg)
-20 °C ukuya kuma-70 °C
Obona kumelana nobushushu obuphezulu 105°C
-30 °C ukuya kuma-80 °C
10% ukuya kuma-80%
5% ukuya 95%
Ngaphambili: UkuFika okuTsha kwe-intshi engama-43 yebhetri eXhobisayo ephathwayo yaNgaphandle yoMqondiso weDijithali kunye nomboniso
Okulandelayo: Lungiselela ubhaka okhokelwayo isikrini esingangeni manzi iipakethe ezihlakaniphile ngasemva ibhegi ebonisa ubhaka onescreen esikhokelela
Umdlali weNtengiso yangaphandle
Isiboniso seLcd sangaphandle
UkuFika okuTsha kwe-intshi engama-43 yebhetri eXhwatshazwayo...
55intshi emgangathweni ukuma zonke kwindawo enye 2000cd ...
Intengiso yeDijithali yeDijithali ye-LCD emgangathweni waNgaphandle ...
IP65 iSikhusi soMbane esingangenwa ngamanzi sokuKhanya okuPhezulu Dig...
China 55 Intshi yangaphandle Touch Screen Kiosk nge W...
I-intshi engama-43 ukuya kwi-100 Intshi yodonga olungangenwa ngamanzi lunyuselwe ngaphandle...
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Imiqondiso yeDijithali yeSikolo, Dooh Umqondiso weDijithali, Imiqondiso yeDigital Directory, Intengiso yeTouch Screen Kiosk, Itheyibhile yeDiy Touch Screen, Udonga lweVidiyo yoMqondiso weDijithali, Zonke iimveliso